मेरो धड्कन तेज हुन थालेको छ - Nepal's No.1 News portal
मेरा भावनाहरू यत्रतत्र सलबलाउँदै छन् । तिमीसँग बोल्न थालेपछि खुसी हुन सिक्दै थिएँ । मायाले भरिन चाहाने यो मुटु फेरि टुट्दैन नि ? समाउनै नपाईँ तिम्रो हात, जोड्नै नपाईँ यो सम्बन्ध हाम्रो साथ यतिकै मा छुट्दैन नि ! मलाई डर लागि रहेको छ ।
मान्छेहरु आफुले माया गरेको मान्छे पाउनलाई जादु टुना गर्ने वा गराउने गर्छन् रे, मान्छेहरु आफूले माया गरेको मान्छे आफ्नै होस् भनी मोहनी लाउने अनि फुकाउने गर्छन् रे, यो जादुटुना भन्ने कुराप्रति म खासै विश्वस्त थिइन्, तर विश्वास गर्न बाध्य भए, जब तिम्रो हाँसोले म मा जादु चलायो, यो मोहनी लगाएर पनि कोही आफ्नो हुन्छ र ? भनेर हाँसो लाग्थ्यो , तर आज मलाई नै तिम्रो बोलीले मोहनी लगायो, सोझो सोचेको थिएँ ।
तिमीलाई तर तिमी त मन चोर्ने जादु गर्न जानेको मान्छे पो रहेछौ । शरिफ सोचेको थिएँ तिमीलाई तर तिमी त बोलीले अरुलाई काबुमा गर्न जानेको मान्छे पो रहेछौ । जसरी तिमीप्रति मेरा भावनाहरु निरन्तर वर्षित छ, त्यसरी नै तिम्रो प्रत्येक शब्दहरुमा म आकर्षित छु ।
जसरी हाम्रो सम्बन्ध भोलि के होला भन्ने डर मेरो मनमा सिर्जित छ, त्यसरी नै केही कारणले तिमीलाई गुमाँउछ कि भन्ने कुराले म त्रसित छु । किन राख्छु म तिम्रो आवाज सुन्ने इच्छा ?